17 October – Maalinta Caalamiga Cirib-tirka Faqriga. | HimiloNetwork
17 October – Maalinta Caalamiga Cirib-tirka Faqriga.
Posted by: Zakariya in Wararka October 17, 2017	0 202 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Maalinta Caalamiga ee Ciribtirka Faqriga waa munaasabad caalami ah oo sanad kasta 17 October loo dabaal-dego. QM ayaa si rasmi ah u aqoonsatay, hayeeshe abaabulkeeda wuxuu markii ugu horreysay ka hir-galay magaalada Paris ee dalka Faransiiska halkaas oo ku dhawaad 100,000 oo qof ay isugu yimaadeen daarta xarunta Human Rights si ay u sharfaan dhibanayaasha saboolnimada, gaajada, qalalaasaha iyo baqdinta sanadkii 1987-kii.
Next: Nin booliska ku amray inay 1,000 jeer share dhahaan sawirkiisa si uu isugu dhiibo.
Meel ka fog Dhulkooda, Carruurta Uygur waxaa lagu barayaa Afkooda iyo Diintoodii loo diiday inay bartaan!
Nolosha ninka cidiyihiisa tarminayay muddo 35 ah